Toddobaadkan waxa madashan inoogu marti ah laba sawir oo taariikhiya. Magaaladu waa Hargeysa. Waa Masjid Jaamaca oo laba jeer la kala sawiray.
Mar waxa sawiray Cali-iid Cumar oo Imaaraadka ka yimid oo weliba raaciyay halkudhegga sawirka ku qoran ee ah: "Si aynu u xusuusanno dharaarihii ina soo maray." Waa markii uu Masaajidku dunsanaa. Sawirka labaad oo ah markii dib loo dhisay waxa qaaday 2007dii Samir Carafaat oo Akaademiga ka tirsan, bal si la isu barbar dhigo laba marxaladood ama laba nololood oo ay ummaddani soo martay si ay ugu cibro qaadato.
Maanta ayaa shalay dhaantay, aynu ku dedaallo in berrina ay maanta dhaanto. Cid kastaba dadaal faran.